Convention entre le SIM et MICA
Fanondranana jirofo ho an’ny fotoam-piotazana 2020-2021
Artisanat: Focus sur la professionalisation des métiers
⚠️ Fampatsiahivana ho an’ireo mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny indostria momba ny tsy maintsy hananana ny fahazoan-dalana mikasika ny fitrandrahana sy fanodinana vokatra na ankora ara-indostrialy.
Ireo antontan-taratasy ilaina amin’ny fangatahana ny fahazoan-dalana mikasika ny fandefasana entana manaraka ny fenitra eny amin’ny tsena
Fitsidihana ny orinasa SSM Ivato
Famokarana tantely manana kalitao ambony sy mihevitra ny sehatra rehetra. Izany no navoitry ny orinasa « Senteurs et Saveurs du Monde » tamin’ny fitsidihana nataon-dRamatoa Lantosoa RAKOTOMALALA, Minisitry ny Indostria, … Read More
Comment on Fitsidihana ny orinasa SSM Ivato
Fanolorana fitaovam-piasana PROCOM – MICA
Ho tohin‘ny fanohanana ny sehatra tsy miankina sy ny sehatry ny asa tanana, ary koa ny fampandehanan-draharaha izay niarahan’ny tetikasa PROCOM (Programme d’appui à L’emploi et à L’integration Regionale) sy … Read More
Comment on Fanolorana fitaovam-piasana PROCOM – MICA
SAKAFO, FOTOTRY NY AINA HO AMIN’NY FAMPANDROSOANA ARA-TSOSIALY SY EKONOMIKA MAHARITRA
Notontosaina ny 13 aogositra tetsy amin’ny Hôtel Panorama Andrainarivo ny fanokafana ny fihaonambe voalohany ho fametrahana ny komity nasionaly mpandrindra ny fampitomboana ny otrikaina ao amin’ny sakafo izay antsoina hoe … Read More
Comment on SAKAFO, FOTOTRY NY AINA HO AMIN’NY FAMPANDROSOANA ARA-TSOSIALY SY EKONOMIKA MAHARITRA
Fampirantiana Solomon Manan’art
Solomon Manan’art, mpanao zava-kanto vita amin’ny hazo Solomon mpanao sokitra malaza avy ao Ambositra tonga mampiranty ireo zava-kantony eny amin’ny Hôtel du Louvre Antaninarenina, izay aharitra hatramin’ny faran’ny volana aogositra … Read More
Comment on Fampirantiana Solomon Manan’art
Fihaonana tamin’ireo iraka tany Kenya
Iraka tany Kenya, tatitra Ny 09 aogositra 2019 lasa teo dia nihaona tamin’ny delegasiona izay nanatontosa iraka tany Kenya ny Minisitry ny MICA Rtoa Lantosoa RAKOTOMALALA, niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy. … Read More
Comment on Fihaonana tamin’ireo iraka tany Kenya
FITSIDIHANA ECLOSIA GROUP
Mitohy hatrany ny fitsidihana ireo indostria izay ataon-dRramatoa Minisitry ny MICA niaraka tamin’ireo delegasionany. Ka ny 08 Aogositra dia tao amin’ny orinasa roa anatin’ny Eclosia Group izy ireo. Eclosia dia … Read More
Comment on FITSIDIHANA ECLOSIA GROUP